नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित | Diyopost
‘दलित महिला’बाट देउवा सरकारमा मन्त्री बन्न प्रतिष्पर्धा, यी हुन् संभावित अनुहार !
काठमाडौँ, १४ साउन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिन बितिसकेको छ । तर राजनीतिक पार्टीभित्र भागबण्डा नमिल्ल्दा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन । यतिबेला सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई मन्त्री…
बौद्ध धर्मग्रन्थ देखाएर १५ लाख ठगी : ४ करोडको धर्म ग्रन्थ भन्दै बन्धकी !
काठमाडौंबाट सञ्चालित एउटा अनलाइनको चितवनमै १४ जना कर्मचारी !
दियोपोस्ट संवाददाता धादिङ, १३ साउन । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले कोभिड १९ विशेष अस्पतालमा जडान गरेको अक्सिजन प्लान्ट नक्कली भएको खुलाशा भएको छ । नगरप्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाको मिलेमतो र निर्देशनमा…
काठमाडौँ, १४ साउन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिन बितिसकेको छ । तर राजनीतिक पार्टीभित्र भागबण्डा नमिल्ल्दा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन । यतिबेला सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई मन्त्री छान्न हम्मे–हम्मे भएको छ । केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका…
२०७८ साउन १३
काठमाडौं, १४ साउन । बौध्द धर्मको प्राचीन पुरातात्विक बहुमुल्य ग्रन्थ भन्दै पुस्तक खरिद गर्ने नाममा ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई महानगरिय प्रहरी अपराध महासाखाले पक्राउ गरेको हो…